Posted by Tranquillus | Jan 20, 2018 | Horumarka shakhsiyeed
Awooddaada go'aan qaadashada waxay muhiim u tahay noloshaada, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid aad u adag.
Sida loo ansixiyo oo loo maro jihada had iyo jeer uu leeyahay qayb aan la aqoon.
Mid ka mid ah ayaa si deg-deg ah uga dhaadhicin kara dareen amni-darro markii la wajaho go'aaminta.
Waxaad dooneysaa inaad dib u tababbarto, laakiin miyaad ka gudbi doontaa? Waxaad leedahay soo jeedin cusub, laakiin sidee ku ogaan kartaa in cawsku ka cagaaran yahay meelo kale? Hadaan idhaahdo oo waan khaldanahay? Marka, waxaan darsaynaa dhammaan dhacdooyinka, waxaan isku dayeynaa inaan qeexno faa'iidooyinka iyo qasaaraha, ugu dambeyntiina qaybtaan aan la garanayn ayaa u koraysa sida ugu dhakhsaha badan tirada dhacdooyinka.
Sida loo sameeyo doorashada saxda ah? Sideen ku ansaxin karaa go'aan aan ogaan ujeedada? Ugu dambeyntiina, ma caqli ma aha in wax wax laga qabto?
Fiidiyowgu wuxuu ku bari doonaa qayb muhiim ah si uu u hogaamiyo noloshaada: awoodda aad u leedahay inaad xulato xulashooyinkaaga!
Ha joogin curyaanimo, inaad kantaroolto noloshaada, doorashadu waxay noqonaysaa isbahaysiga ugu fiican.
Fiidiyowkani waxaad ka heli doontaa talo iyo xal kuwaas oo kuu oggolaanaya in aad go'aanno ka dhigto si sahlan, oo leh hufnaan dheeraad ah ..., iyo wax kasta oo, kaliya 5 waxay tilmaamaysaa:
1) Fursadaha : kuwa aad heli kartid, waxaa jira qaar badan oo ka mid ah xitaa marka ay tahay inaad go'aansato goorta aad go'aan gaadhid!
2) Dhaqdhaqaaqa : Isku dheellitirida garashada iyo caqliga!
3) Hawl : Shidaalka ugu weyn ... Go'aankani miyuu igu farxayaa?
READ Ka Cabsida Aragtida Kale ee kale-Maxay Sartooyi u Tahay Dagaalka?
4) Xanaag : Dhageysiga kuwa kugu xeeran ayaa ka dhex shaqeyn kara doorashooyinkaaga.
5) Tamartaada Naafada ah : Ka fikir xisaabtaada iyo dareemahaaga ku saabsan doorashooyinkan.
Hadda waxaad leedahay furayaasha aad ku shaqeyneysid go'aankaaga, maxaan sameynaa?
Go'aan sameynta-Sida loo sameeyo Xulashada Xulashada? May 11th, 2018Tranquillus
horeIlaha ugu Sarreeya ee Barashada Ingiriisiga
socdaHagaha Habboon ee Habboon ee Barashada Isbaanishka